ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » သင် Dateable Are?
အားဖြင့် Carisa Peterson
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဖေဖော်ဝါရီ. 20 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
နည်းနည်းပိုကောင်းတဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိမှရရန်နည်းလမ်းများစာရင်းတစ်ခု, "တစ်ဦး lotta bit" ပို dateable သင်အောင်
လူအတော်များများသည်မိမိတို့ချိန်းတွေ့ဘဝအသက်တာ၌ဖြစ်စေအမှားသောသူတို့သည်ကောင်းသောစိတ်ကူးဘဲဖြစ်ပါတယ်, ကိုယ့်ကိုယ်, များမှာ. ဒါဟာအပြန်အလှန်အားထင်ရစေခြင်းငှါ, သင်မူကား, တက်ကြွစွာတစ်ဦးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ကြိုးစားနေကြသောအခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးကာလ၏တစ်ဦးဖြစ်သည်နှင့်သင်ဘာကြောင့် “ကို tick”. အမျိုးသမီးများ, အမျိုးသားများထက်ပို, ရန်ကြလေ့ရှိပါတယ် “ငါသည်အသင်တို့ကဲ့သို့မည်သို့ပင် Like”-syndrome (ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင့်အမျိုးသမီးများအပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ယူဆနေကြသည်ရှိနေဆဲဟုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များအား, သူတို့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားချို့တဲ့ amorphous သူများ), နောက်ဆုံးမှာအကောင်းဆုံးမှာမကျေနပ်ကြနှ​​င့်စွမ်းနိုင်ခြင်းမရှိဆက်ဆံရေးအတွက်ရလဒ်; နှင့်အံ့သြဖွယ်များ, ရှိခြင်းသည်အခြားသူတစ်ဦးမှာအချိန်နှင့်အမျက်ဒေါသလည်းလျော့ “ပြောင်းလဲသွားတယ်”, အဆိုးဆုံးမှာ.
ငါ့အကြိုက်ဆုံးစကားသည်တစ်ဦးမှာဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုဝင်–ဘယ်လိုတစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်သိနှင့်ချစ်ရန်ယူဆ, သင်သိနှင့်မချစ်လျှင်? ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိ. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင်စားပွဲပေါ်မှာစေခြင်းငှါငါအတိအကျသိခွင့်ပြု, ဒါကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူသင်နှင့်သင့်ကို Right တစ်ခုမှာမှအပြန်အလှန်အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူဒါမှမဟုတ်နှစ်ကိုပြောင်းလဲသွားကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအရည်အသွေးတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှာစေသည်.
Shel Silverstein ကသူ့ကဗျာကိုရေးသားခဲ့သည်အဖြစ်, “မျက်နှာဖုံး”:
ဒီနေရာမှာသိကျွမ်းဖို့နည်းလမ်းအချို့ကိုနှင့်သင်ကိုချစ်သောသူ, တခြားတယောက်ယောက်ကတတ်နိုင်သမျှဒါကြောင့်, လွန်း!
ဒီတအမျိုးမျိုးသောနှင့်အမြောက်အမြားဖြင့်ဝိုင်းပစ်လွှတ်လိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ် “Self-အကူအညီ” Guru, စာအုပ်တွေ, နှင့်အမျိုးသမီးအုပ်စုများ. ပြည်သူ့များသောအားဖြင့်ညစာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကစဉ်းစား, သငျသညျရှေ့တျော၌တစ်ဦးတည်းအများပြည်သူအတွက် dined ကြပြီမဟုတ်ပါလျှင်ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်အဆင်မပြေနိုင်သည့်. ဒါကြောင့်မည်သည့်သိသာထင်ရှားသော outing နိုင်ပါတယ်, အဖြစ်ကြာမြင့်စွာကပျော်စရာနှင့်သင်ပျော်မွေ့ရာတစ်ခုခုဖြစ်သကဲ့သို့–ရုပ်ရှင် (မီးကိုဆင်းသွားတစ်ချိန်က, ဘယ်သူမှတစ်ဦးတည်းထိုင်နေသောသူသည်အာရုံစိုက်နေပါတယ်), ဘောလုံးတလုံးဂိမ်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ရက်ခရီးစဉ်တစ်နေရာရာမှာအသစ်.
အချို့အခမဲ့အချိန်ရှိသည်? တစ်မိနစ်အဘို့ရပ်တန့်နှင့်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းညာဘက်ထို့နောက်ထိုငျသညျပျော်ရွှင်စေမယ်လို့အဘယ်အရာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ–ပြီးတော့လုပ်ဆောင်သွား! ဒါဟာအသက်တာ၏ဆူညံသံမှထွက်ညှိဖို့အရှိဆုံးရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောနည်းလမ်းများတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့် Facebook သို့မဟုတ်ရုပ်မြင်သံကြားသို့စို့ခံရသဖြင့်အချိန်ကိုဖြုန်းကိုရပ်တန့်. ဒါဟာအစအများအပြားပိုပြီးကျပန်းကြောင်းမှတက်သင်ဖွင့်လှစ်, မှော်စုနှင့်အလှည့်, နှင့်အစည်းအဝေးသင်ထက် သာ. များသောလူရှိသည်မယ်လို့, ရမ်းခြင်းနှင့်မသိစိတ်အချိန်သတ်ဖြတ်. ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်, သင်ပျော်ရွှင်ဖို့တလျှောက်တွင်တစ်စုံတစ်ဦးကမလိုအပ်ပါကြောင်းတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်–သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နိုင်ပါတယ်.
ဒါကပိုစတာဖော်ပြသောစကားလုံးတစ်လုံးနှင့်အတူ post မှမှတ်ချက်ပေးရန်လူတွေကိုမေးလူကြိုက်များ Facebook ကလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပီပီ၏မျိုး. သို့သော်သင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအများပြည်သူနှင့် ပတ်သက်. စဉ်းစားကြည့်ပါနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်၏ရိုက်ချက်, သူတို့သည်သင့်ကိုဖော်ပြရန်မယ်လို့ဘယ်လောက်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုတောင်း. ဒါဟာအလင်းမှကူညီပေးပါမည် “ခင်ဗျား” သင်တို့သည်လောကီမှတင်ဆက်ထားပါတယ်ဖြစ်ကြောင်း, ထို့ကြောင့်ရက်စွဲများ. ဖြစ်နိုင်စရာ, ဆုံးနဲ့အလားအလာ, ဒီသင်သည်သင်၏စစ်မှန်သောမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ရာနှငျ့ကိုက်ညီ. သင်တို့မူကား, အမှတ်တမဲ့သင်အကြောင်းကိုမှန်သည်ကိုသိသောအရာကိုထက်ကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကောင်ရှိခြင်းအဖြစ်ကိုရိပ်မိလျှင်–ဒီမအောင်မြင်သောတစ် string ကိုအဖြစ်မပျက်ပါစေမည်အကြောင်း, ရှုပ်ထွေးသောဆက်ဆံရေး.
ဤသည်၏ဆန့်ကျင်ဘက်များ၏ကြင်နာတတ်၏ #2. အဲဒီအစားသင်လုပ်နေတာကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်ကိုသိတစ်ခုခုမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကုသ၏, လုံးဝအသစ်တစ်ခုခုလုပ်! ရှေ့တော်၌မြင်းစီးဘယ်တော့မှမ? လွယ်ကူသောလမ်းကြောင်းစီးကမ်းလှမ်းတဲ့ကုမ္ပဏီကိုရှာပါ. ငါသည်သင်တို့ကိုချွတ်ပယ်ဘောင်းဘီရမျးကွောကြောင့်ဘာမှလုပ်နေတာထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့–ကရက်စွဲများကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှာနေစဉ်–သင့်ရဲ့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အသစ်တခုအတှေ့အကွုံကိုခံစားနိုင်ဖြစ်ခြင်းကနေအာရုံစခွေငျးငှါ. ထိုနေ့၏အဆုံးမှာ, သင်နှင့်သင့်အကျိုးစီးပွား define အထောက်အကူပြုနောက်ထပ်ဘဝအတွေ့အကြုံအထီးကျန်လိမ့်မည်, သင်စားပွဲဝိုင်းကိုရောက်စေခြင်းငှါအခြားကျွမ်းကျင်မှုနဲ့စကားပြောဆိုအမှတ်ရစေခြင်းငှါ.
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ဦးယုံကြည်မှုအသိရှိခြင်းဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပွုစုပြိုးထော by, သင်ကပိုပြီးပျော်ရွှင်လိမ့်မည်, ပိုပြီးပြည့်စုံစေလူတစ်ဦးနှင့်သင်ပိုပြီးဆက်ဆံရေးအားပူဇော်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်; နှင့်အတောအတွင်းတွင်, သင်ပျော်စရာတွေအများကြီးကိုသင်တို့ရှိသမျှပတ်လည်နေသောသင်သိထားရန်လာပြီပါပြီလိမ့်မယ်.